Sir David Amess: Cali Xarbi oo loo haystay dilka xildhibaanka UK oo dacwad rasmi ah lagu soo oogay | Biyoguurenews.com
Home Wararka Sir David Amess: Cali Xarbi oo loo haystay dilka xildhibaanka UK oo...
Ali Harbi Ali was arrested at the scene of the stabbing
Nin 25 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwad dil iyo diyaarinta falal argagixiso kadib markii tooreey lagu diley xildhibaan Sir David Amess.
Cali Xarbi Cali ayaa la xiray ka dib weerarkii ka dhacay deegaanka Leigh-on-Sea, Essex, Jimcihii.
Sir David, oo ahaa xildhibaan muxaafid ah, tan iyo 1983-kii, ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo badan oo tooreey ah, wuxuuna ku dhintay isla goobta.
Cali waa nin British ah oo aabihiis uu hore u ahaa la taliyaha Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Nick Price, oo ka tirsan Adeegga Xeer-ilaalinta, ayaa yiri: “Waxaan u gudbin doonnaa maxkamadda in dilkan uu xiriir leeyahay argagixiso”.
Cali Xarbi ayaa lagu eedeeyey inuu booqday guriga hal xildhibaan iyo Guryaha Baarlamaanka sannadkan, taa soo qayb ka ah sahaminta weerar dhici kara.
Khamiistii, Mr Ali, oo ka yimid waqooyiga London, ayaa ka soo muuqday Maxkamadda Westminster Magistrates ‘Court. Isagoo xidhan dhar isku joog ah oo midabkiisu yahay madow xigeen iyo muraayado madow, ayuu hadlay si uu u xaqiijiyo magaciisa, da’da iyo cinwaankiisa.
Waxaa dib loogu celiyay xabsiga waxaana lagu wadaa in Jimcaha uu ka soo muuqdo Old Bailey.
Kaaliyaha Taliyaha booliska Metropolitan Matt Jukes ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska iyo asxaabta xildhibaanka.Xubno ka tirsan dowladda ayaa BBC-da u sheegay in ninka heysta dhalshada Britain ee falkaas u xiran uu u muuqdo inuu asal ahaan yahay Soomaali.
Sir David, oo 69 jir ahaa, baarlamaankana ku matalayay deegaan baarlamaaneedka Southend West, ayaa kulan la lahaa dadka soo doortay, isagoo kala hadlayay waxyaabaha ay u baahan yihiin.
Xildhibaanka iyo dadkiisa ayaa Jimcadii ku shirayay meel kaniisad ah markii la weeraray abaare 12:05 BST.
Taliyaha booliska gobolka Essex, BJ Harrington ayaa sheegay in Sir David uu “si sahlan u gudanayay waajibaadkiisa markii uu naftiisa waynayay”.
Booliska ka howl gala magaalada ayaa sheegay in ciidankooda la dagaallanka argagixisada ay ku howlanayeen baaritaanka, iyagoo kaashanaya khubaro ka socda qaybta howlgallada khaaska ah ee magacooda loo soo gaabiyo ERSOU.
Sir David waxa uu xildhibaan ahaa tan iyo sanadkii 1983-kii, waxa uuna ahaa aabe dhalay shan carruur ah.
Waa xildhibaankii labaad ee isagoo baarlamaanka ka tirsan la dilo shantii sano ee lasoo dhaafay gudahood. Sanadkii 2016-kii ayaa la dilay Jo Cpx oo ahayd xildhibaanad ka tirsan xisbiga shaqaalaha.
Ra’iisul Wasaare Boris Johnson ayaa xildhibaanka la dilay ku tilmaamay in uu ka mid ahaa dadka “ugu naxariista badan, ugu wanaagsan, uguna macquulsan dhinaca siyaasadda”.
Afhayeenka Aqalka Baarlamaanka, Sir Lindsay Hoyle, ayaa BBC-da u sheegay in boolisku ay la xiriirayaan dhammaan xildhibaannada si ay u hubiyaan amnigooda, ayna dib ugu xaqiijiyaan nabad galyadooda kaddib dilka loo geystay xildhibaan Sir David.
Waxa uu sheegay in isaga qudhiisa si caadi ah u gutay waajibaadkiisii ku aaddanaa la kulanka dadka ku dhaqan deegaan baarlamaaneedka laga soo doortay, isagoo intaas ku daray inay muhiim tahay in xildhibaannada oo dhan ay sii wadaan xiriirka kala dhaxeeya dadkooda.
“Waa inaan xaqiijinno in dimuqraaddiyaddu ay sii jirto dhacdadan kaddib,” ayuu yiri.
Balse xildhibaanka xisbiga Conservative-ka, Tobias Elwood, ayaa u sheegay BBC-da inuu soo jeedin lahaa in xildhibaannada ay joojiyaan kulamada fool ka foolka ah ee ay la yeelanayaan shacabka ku sugan deegananadooda wixii ka dmabeeyay dilkii toorida loo adeegsaday ee Sir David.
Previous articleMasaajid Taariikhiya oo ku Yaalla Gobolka Amxaarada oo Tigraygu Burburiyeen+Arday madarisad Dhiganaysay oo ay xasuuqeen
Next articleHawenaydii Barkhad lacagta siisay oo ka falcelisay hadalo suldankiisa kasoo yeedhay